Ukungalahli kweSoul Brothers izindawo zabampofu kuyisibonelo – Bayede News
Ukungalahli kweSoul Brothers izindawo zabampofu kuyisibonelo
IsiZulu siyasho ukuthi, “Akubuyelwa emuva kungemgqigqo”
IsiZulu siyasho ukuthi, “Akubuyelwa emuva kungemgqigqo” ngoba uma bekungenjalo bekuyobuyelwa kuleziya zinsuku lapho amaqembu amakhulu ezikaqedisizungu ayewazisa amahholo asemalokishini nasezindaweni ezingaphandle kwamadolobha amakhulu. Ayakhumbuleka amahholo afana noGlazier eHammarsdale, Umlazi Cinema, koDabeka eKranskloof Hostel, koClermont Hall nakoFelixton, eMshinini, eMandeni. EGoli kwakukhona iJabulani Amphitheatre nezinye izindawo. Konke lapho yila izihlabani kwezikaqedisizungu zazakhiwa khona zisengamaklume zize zimile amabamba zibe yizihlabani ezaziwa umhlaba wonke.
Indaba yonakala ngokuthi kuthiwe libuyile izwe amaciko asevuleleke ukudlala emadolobheni amakhulu. Kwaba wukulahlekelwa kwabathandi bezikaqedisizungu ngamaqembu omculo abawakhonzile nababewafukule ngezimali zabo okuselokhu kwathi nhlo bazisebenzela kanzima. Aqala amaqembu ngoba sekukhululekiwe aphawula ukuthi emalokishini akuphephile, izindawo zokupaka zincane nawo wonke amanye amanangananga ayiqiniso vele, kodwa ababekwazi ukweqela ngalena kwawo bengakavulelwa iminyango koThe Durban Playhouse nakwezinye izindawo eziphambili.
Ukuza kwamaqembu ezobuciko ezindaweni ezingamalokishi nezisemakhaya, ngaphandle kokuthi kuyabajabulisa abantu balezi zindawo, bazizwe bebalulekile, kuphinde kukhuthaze ithalente lendawo ebelinganakwe muntu. Amaciko agcina esengondabizekwayo njengoBrenda Fassie, oBhekumuzi Luthuli, oMbongeni Ngema noConnie Chiume kwezeshashalazi babengeke bagcine baziwa bengaqalanga emalokishini, kuthi ngokufika kwezihlabani eseziphumelele zibone ikhono kuwo ziyowalolonga agcine eseyilokhu esikubonayo nokubatshazwayo.
Le nkumbulo yeminyaka eyedlule ivuswa yizindaba zokuthi iSoul Brothers, ogandaganda baseNingizimu Afrika namuhla kusihlwa izobe iyigxoba eKK ehholo lakwaDabeka. Lokhu kuyisibonelo sokuzehlisa okuyinqaba eqenjini elisezingeni lomhlaba njengeSoul Brothers. Kukhombisa ukuhlonipha abantu abakuthathe ungelutho bakubeka ezingeni lapho usuhlonishwa nangabantu abangayazi imvelaphi yakho. Isuka kude le Soul Brothers kusekhona abasunguli bayo bokuqala nasebeyihola manje abanjengoMoses Ngwenya oklwebha i-organ kulona iqembu. Thina luntukazana iSoul Brothers siyazele khona ehholo lakwaDabeka. Lokhu kokuthi izothi uma iqeda kwaDabeka kusasa ngoMgqibelo idlulele eYMCA kuBeatrice Street eThekwini yikhona okuvele kuqede konke ngeSoul Brothers nokwazisa imvelaphi yayo njengeqembu. Mangaki nje amaqembu asakhumbula ukuthi kwake kwakhona iYMCA eyabe iyinsika yezikaqedisizungu eThekwini namaphethelo? Okwenziwe yiSoul Brothers kubaluleke ngendlela eyisimanga kokuletha ubumnandi ezindaweni ezingasanakwe muntu.
Okunye okungavamile, nokuyisibonelo ngeSoul Brothers wukuthi uma isifikile kulezi zindawo yona ifike yenze into yamehlo ebizoyenza noma ngabe ibidlala phambi kwezikhulu zikahulumeni kukhona namanxusa amazwe ngamazwe. ISoul Brothers ayilindi ukuthi iyoze ingene kugcina enkundleni sekuqale amaqembu amancane ayibhulela amazolo. Kube ziyasuka kuvele kungene yona kuqala ishaye wona lamanoni eyaziwa ngayo niyizihlwele nivele nihlanye zisuka ebhandeni. Ngakho-ke, njengoba uBlack Moses ethembisa abathandi bomculo izinga eliphezulu ngempela kuzoba njalo.
Kuphawuleka nenani eliphansi lemali yokungena. Okwenziwa yiSoul Brothers esiteji kungaphezulu kakhulu kwe-R100 elizokhokhwa ngabazongena ehholo ngakho abalandeli bomculo akungabazeki ukuthi bazongquzuka ndawo zonke bezobona into yamehlo ezobe yenziwa yimitshotshovu esteji.
Sengiphetha, nathi esingabathandi bobumnandi sinomsebenzi wokwenza izindawo zethu emalokishini nasemahholo asemakhaya abe yizindawo eziphephile amaciko azokwenamela akhululeke ukuza kuzo. Izinto amaciko akhala ngazo njengobugebengu, ukunganakekelwa kwamahholo nokungawahloniphi amaciko uma esesiteji kuyizinto esingazilungisa kalula siyimiphakathi. Ukuza kwamaqembu amakhulu nahlonishwa umhlaba wonke njengeSoul Bothers akugcini ngokuphakamisa igama kodwa futhi kufukula umnotho wayo indawo. Abantu bahlomula ngezindlela eziningi.
Okwenziwe yiSoul Brothers kokungakhohlwa yimuva layo kuyisibonelo okufanele sithathwe nangamanye amaciko. Abathandi bezikaqedisizungu abafulathelwa ngamaciko kulezi zindawo basekhona futhi basawathanda amaciko abo. Lokhu bazokukhombisa ngokuhambela ngobuningi babo lawa makhonsathi amabili eSoul Brothers kusukela namuhla ebusuku eKK KwaDabeka ehholo. Yomibili imicimbi owaKwaDabeka naseYMCA iqala ngelesi-7 kusihlwa kanti emnyango kungenwa nge-R100.